Iibso Dhar Kala Duwan Oo Kala Duwan Oo Fudud Oo Kala Duwan - Maraakiib Bilaash Ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Dharka Sare ee Tooska ah ee 'Plit'
L / Madoow XL / Madoow S / Madoow M / Madow
Kala-Bixinta Sare ee PU maqaarka madow ee dharka adag - L / Black gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Season: Kulayl, Guga, Dayrta
Gacmo Style: xiisaanka
Dharka maqaarka ee PU: Off Garabka Tooska ah ee Dharka Madoow
Length (cm) Cabbirka Bust(Cm) Cunto-xanuun(Cm) darafta(Cm) Cabbiridda caanaha (cm)
Dhar qurux badan sida maqaar fidsan oo kale oo loogu talo galay oo ku habboon 100% oo iskucelcelis ah
атья красивое но не неопрное снимаю звезду (хотела снять но ноадно)
Waan jeclahay! Waxaan isku dayay kaliya dib u eegista. Dabcan gacmahaygu waxay umuuqdaan kuwa argagax leh laakiin taasi waa dhibaato nafteyda ah. Dharka runti waa mid aad u fiican lafteeda. Dusha sare xoogaa way ka weynaataa (Booraannadaydu wey badan yihiin jidka). Waxaan ahay 5'2 iyo 192lbs. Waxaan dalbaday XL. Miskaha iyo hilladaygu waxay ku sugan yihiin dhinaca korantada wayna ii shaqaysaa.
Adeeg macaamiil wanaagsan, kaydso oo keydso oo aad u mahadsanid. Waxaan wali sugaa dharkeyga kale wali ma imaan.